Shirkadda DP-WORLD oo ka Baxday Qaybo Kamid ah Heshiiskii Dekedda Berbera | Yool News
Shirkadda DP-WORLD oo ka Baxday Qaybo Kamid ah Heshiiskii Dekedda Berbera
February 6, 2017 - Written by admin
Hargeysa(Yoolnews.com)-Warar Shebakadda Yoolnews.com heshay, ayaa daboolka ka qaaday in Shirkadda DP-WORLD ka baxday qaybo kamid ah heshiiskii Somaliland la gashay ee Golaha Wakiiladu hore u ansixiyey, sidaana Xukuumadda Somaliland dhinaceeda ku aqbashay.
Waxa kaloo, wararku intaa ku dareen isbedelka ku yimi heshiikii DP-WORLD la gashay Somaliland ee ku saabsanaa maamulka iyo gacan-ku-haynta Dekedda Berbera, waxa ka mid ah in shirkadda DP-WORLD ka baxday dhismihii 400 Mitir ee lagu balaadhinayey dhismaha Dekedda Berbera, iyo qoddobka labaad oo ah in Maamulka Somaliland dawladda Imaaraadka Carabta u oggolaadaan saldhiga Milateri ee ay ka doonayaan Madaarka Berbera.
Geesta kale, isbedelkan ku yimi heshiiskii DP-WORLD iyo Somaliland, ayaa sida iluhu tibaaxeen waxa uu ka dhashayb sodaal dabayaaqada sannadkii hore ay ku dalka Imaaraadka Carabta wefdi Wasiiro ah oo ka socday Xukuumadda Somaliland, kuwaasoo wararku xuseen in ujeedada socdaalkoodu la xidhiidhay codsi kaalmo dhaqaale oo ay ka dalbadeen dawladda Imaaraadka Carabta, iyagoo u cuskanaya arrimo ay ka mid yihiin Abaartu.
Waxaana wararku intaa ku dareen in dawladda Imaaraadku aakhirkii ogolaatay arrimahaa bedelkeeda inay bixiso Shan Bilyan oo ka mid ah lacagtii Xaqul-qalinka ahayd ee laga bixiyey heshiiskii lagu meelmariyey Dekedda Berbera.
Wariye’ Xamse Jirde Axmed